Umhla My Pet » Yintoni Ngokwenene Kufuneka wazi: Chivalry nguKumkani
Yena wayefuna yinkcubeko lwanamhlanje kuba yinkosikazi ehlakaniphileyo okwaziyo ukuthatha unonophelo aze aye emva koko ufuna ukuba. Undishiya ngamandla kangaka enyanisweni, ukuba akukho uhlobo intombazana kufuneka ukuba iingcango vuleka ngenxa yakhe. Ndimbuza kuhlekisa iintyatyambo njenge kaliso limane uthando uthabathe ngokuhlawula sangokuhlwa nokutyhola ukuzimela yakhe yemali. Nantsi amadoda ofihlakeleyo: Enoba wathatha CEO yenkampani phandle ngomhla wokuqala okanye ndithandana intombazana ligculela romance okuhlazisayo, ngenene chivalry akazekeleli kungena umdlalo, kwaye usoloko zomzi wakhe.
Musa Bexambulisana, Thabatha nje Chance
Abantu bathi loo mini yanamhlanje, umfazi esizimeleyo ngawethu izithethe chivalrous njengoko atshabalalise kulwela. Kule mihla, ewe, amadoda nabafazi ababeziintanga intle kakhulu, kodwa chivalry ayikho engaqondakaliyo ethethelela ingcinezelo yabafazi okanye kuphazamisana sikweni zentlalo yabafazi. kuphela 7 ekhulwini abantu baziva ngathi izenzo chivalrous, ezifana ngokubamba iingcango evulekileyo, na ukuthenga, ngokutsho Daily Mail. kanti, ngokutsho omnye umntu Elite Daily, enye 93 ekhulwini kubafazi sicela ezi zenzo chivalrous. undertones Chivalrous ziyinto abafazi abaninzi kufuneka silindele, kunye namadoda kufuneka lubandakanye.
Ngoko mhlawumbi chivalry ayifile, loo nto ngenye. Louisa Peacock of The Telegraph ithi amadoda ukuphepha chivalry ngokoyika ukuba izenzo chivalrous iya baqondwa okanye ukuthumela uphawu engalunganga. Kule kwixesha ledijithali, angaphenduli ukuba umyalezo obhaliweyo okanye angayithandiyo umfanekiso Instagram uyakwazi ukuthetha imithamo, ke kuba nzima ukuva njengoko nehieroglyphics. Sinokuba inkcubeko nowathwethwa kuzonwabisa phezu ngokuhlahlela kunye baqashele yesibini, ingakumbi xa kuziwa kwi ukuthandana romance. Naxa isizwe sethu yonyula umongameli wokuqala nemazi, ukuba umntu uba ukuzisa roses izakujongeka ithiyelwe nakumantombazana, abafazi siyalixabisa indoda ngubani chivalrous. Chivalry na Wayetsho umfazi ethe kuba emdala sasiyinkosazana ubuncwane ngubani ekufuneka kusindiswa Prince Charming. Yinto ngembeko, yokubonisa uhlobo ibinzana uthando nentlonelo. Abafazi uyafuna kuthathwa ngemihla. Angamantombazana uyafuna iboniswe kukunqulwa. Abafazi ilindele ukuba kukutefiswa.
Chivalry eyenza umntu abe yindoda nomfazi ndizive inenekazi. Mphathe lady ebomini bakho kunye ezi zenzo chivalry nezijekulo uthando, ukuba uza ngomhla wesibini okanye sele etshatile 10 kwiminyaka.
Wamangaliswa eneentyantyambo ngosuku lwakhe lokuzalwa, ngoSuku Valentine okanye ngenxa nje. ukuthumela iintyatyambo, ngathi qhele FTD wavuka ezintle, ukuze abe yemihla kuthandana, kodwa abafazi baya kumthanda esi senzo kude kuphele ixesha.
Mxelele ukuba nguwe yonke lento. Xelela ubuso-ngobuso bakhe. Okubhaliweyo oko. Bhala phezu Post-it. Nje ukuqinisekisa ukuba akabalibali nto.
Hamba elikufutshane kwendlela, ubambe isandla sakhe xa betsiba yezithuthi. Uziva ngathi wena ukukhusela ukhuseleko yakhe ezintle.
Thabatha yakhe kwisidlo intle. Nasemva kweminyaka ngokutya pizza esingqengqelweni kunye, sasemini nice rekindles ukuba yintlantsi. Ewe, ukuhamba phambili ukuvula ucango lwemoto ngenxa yakhe.
Ndibambe isandla sakhe ngokungalindelekanga. Bamba isandla sakhe xa ubukele iTV okanye ngoxa umgca ikofu. Intliziyo iya Eny.
Bulisani naye emnyango phambi komhla, uhambe ukuba ucango emva. Nantso sokuba kwenziwe oko njani kwi bhanya.
Tsalela ukukhangela-in, kunokuba itekisi. Yena Ntombikayise lady esa ebomini yaye kubalulekile ngokwaneleyo akho ukwenza umnxeba.
ukuncoma yakhe. Kuba yinto entle.